News – Page 87 – မြန်မာသတင်းစုံ
နိုငျငံတဈဝှမျးလုံးအတှကျ နေ့ ညမနားတမျး လိုအပျသောနရောတိုငျးအတှကျquarantineမိထားသောနရောမှ ဓမ်မဒူတဆရာတျောဒေါကျတာအရှငျဆကေိန်ဒ သညျစဈကိုငျးမွို့တျောအတှငျးသီတငျးသုံးနထေိုငျတျောမူကွသော ဆရာတျောသံဃာတျောမြား သီလရှငျဆရာကွီးဆရာလေးမြား ဆှမျးခံ ဆှမျးဆနျခံကွှရာတှငျ covid-19ရောဂါအန်တရာယျမကူးစကျစရေနျရညျရှယျ၍ သံဃာတျောကြောငျးတိုကျ-၅၆၂ကြောငျး -၅၈၀၁ဦး သီလရှငျခြောငျ-၃၉၈ခြောငျ ၇၀၃၇ စုစုပေါငျး -၁၂၇၈၅ဦး တဈပါးလြှငျ-၄-ထုပျနှူနျးဖွငျ့-၅၁၁၄၀-ထုပျအားဘုနျးဘုနျးကွီးကိုယျစား စဈကိုငျးခရိုငျအုပျခြုပျရမှေူး မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူး သာသနာရေးမှူး ဆရာတျော၏နောငျတျောညီတျောမြား ဓမ်မဒူတမောငျမယျမြားမှတဆငျ့၂၃ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးမြားမှဝယြောဝစ်စကုသိုလျယူပွီးကြောငျးတိုကျအသီးသီးသိုပို့ဆောငျကုသိုလျယူခဲ့ကွပါသောကွောငျ့ လှူဒါနျးမှူ့အောငျမွငျစှာပွီးစီးပါသညျ ဆရာတျောဘုရားကွီး၏ကုသိုလျနှငျ့ဆကျစပျ၍ အမြှ အမြှ အမြှပေးဝပေါသညျ သူတျောကောငျးအပေါငျးတို့ခငျဗြာ အသငျ့စား ခေါကျဆှဲ ကွာဇံ ဆနျပွုတျပါခငျဗြာ သားသားဆနျပွုတျမှ အထုပျ-၃၀၀၀-သီးသနျ့လှူဒါနျးပါတယျေ လှူဒါနျးမညျ့ပစ်စညျးမြားအားလုံးအား မန်တလေးမွို့ နေ ကိုမိုးကြျောကြျော နှငျ့ဇနီး Read more
နော်ဝါး(18-နှစ်) ဆိုတဲ့ေ ကာင်မလေးတယောက် မနေ့ က စတုဒီသာအတွက် တို့စရာ သွားယူရင်းဆိုင်က ယ်ပေါ်ကပြုတ်ကျ တာဦးခေါင်းအနောက်စေ့ကွဲပီးသတိလစ် သွားလို့ မြိုင်ကြီးငူတိုက်န ယ်ဆေးရုံကနေဘားအံပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုလွဲပြောင်းရတယ် မြိုင်ကြီးငူ စစ်ရှောင်စခန်းကလို. သိရပါတယ်။အဲ့ဒါ ရဲစ် တို့ဆေး ရုံက Ambulance ကားကလဲပျက်စီးနေတော့ ကားနဲ့ဘား အံဆေးရုံကိုသယ်လာခဲ့တယ် လို.ဆိုပါတယ်။ အခုနော်ဝါးလေး CTဓာတ်မှန်ရိုက် မလို့လုပ်နေတုန်းမှာတိမ်းပါးသွားခဲ့တယ်(ပြောရင်းနဲ့ငိုသံပါလျက်,အနော်ရင်ထဲဘယ်လောက်တောင်ခံစားနေ ရတယ်ဆိုတာ ဖုန်းထဲကအသံကိုနားထောင်ရင်းသိပါတ ယ်အနော်ရယ်)ဘားအံပြည်သူ့ဆေးရြုံ ကီးမော်ကျူးရီသို့ရောက်ပီးလိုအပ်တာမျာြး ပင်ဆင်ဆောင်ရွက်ကာ သူေ နတဲ့ စစ်ရှောင်စ Read more
မော်တော် ပျက်ထဲမှာ နှစ်နဲ့ ချီပြီး သူ့သားပြန်အ လာကို စောင့်နေရ ရှာတဲ့ မိခင် ဒီပုံလေးတွေ့သွားလို့ ငါ့အမေပါလားလို့ သိခဲ့ရင် အမြန်ဆုံးပြန်လာ ခဲ့ပါလားဗျာ အော် အမေ ရယ် ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ မော်တော် ပျက်ထဲမှာ နှစ်နဲ့ချီပြီး အမေ့ မှာသူ့သားပြန်အလာ ကို စောင့်နေ ရရှာတာတဲ့။ အမေ့သားမလာပေမယ့် အေ မအသက်ဆက်ရှ င်ဖို့ ကျွန်တော်လာခဲ့ပါ့မယ်ဗျာ။ အော်…မိဘ မိဘ…မေတ္တာ တရားတွေက ကြီး Read more
ဥပဒေကျောင်းတက်ဖို့အတွက် ပဲပြုတ်နဲ့ အီကြာကွေးရောင်းပြီး ဘဝကိုယ်ကြိုးစားကာ ကိုယ်ဝမ်းကိုယ်ကြောင်းနေတဲ့ ရိုးသားကြိုးစားတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ယနေ့ခေတ်မှာ သူ့လိုလုပ်ကိုင်ဖို့ တစ်ချို့လူငယ်အများစု ရှက်ပြီးမလုပ်ချင်ကြဘူးဆိုတာ သေချာသလောက်ပါပဲ။ဒါပေမယ့် သူကတော့ သူ့ကျောင်းစရိတ်အတွက် ဒီအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်လာခဲ့တာ (၂)နှစ်အထိရှိနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု သူ့ရဲ့ စားသုံးသူဖောက်သည်တွေအပေါ်မှာ တန်ဖိုးထားတဲ့ စိတ်ထားလေးကလည်း ချီးကျူးစရာပါသူ ပုဆိုးနဲ့အင်္ကျီအဖြူလေးကို ဝတ်ပြီးဈေးရောင်းတာက သူ့ဖောက်သည်တွေရှေ့မှာ ဘောင်းဘီဝတ်ပြီး ​ရောင်းရင် ရိုင်းသလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ပါတဲ့ တကယ့်ကိုလေးစားဖွယ် စိတ်ထားလေးပါနော် ဥပဒေ ကျောင်းတက်ရင်း ပဲပြုတ် အီကြာကွေး ရောင်းပြီးကျာင်းစရိတ်ကို ရှာနေတဲ့ ဥပဒေကျောင်းသာါးဟာ သမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ရဲတဲ့သတ္တိမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရဲရဲကြီးပြောရဲပါတယ် Read more
အဘိုးအဘွားတွေကို မစွန့်ပစ်ဘဲ စောင့်ရှောက်ချင်တယ်ဦးဇင်းတစ်ပါး(သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို မကျွေးနိုင်ရင် လာအပ်လိုက်ပါဆိုတဲ့ ဦးဇင်း)ယနေ့ခေတ်မှာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို လမ်းဘေးမှာ စွန့်ပစ်သူတွေရှိလာပါတယ်…အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မကျွေးမွေးမပြုစုနိုင်လို့ ခုလိုစွန့်ပစ်မှုတွေ ဖြစ်လာရတယ်လို့ ဆိုရမှာပါဒါကြောင့် အဘိုးအဘွားတွေကို မစွန့်ပစ်ဘဲ စောင့်ရှောက်ချင်တယ်ဦးဇင်းတစ်ပါးက ခုလို ပြောပြထားပါတယ် အဖိုးအဖွားများကို လမ်းဘေး မစွန့်ကြပါနဲ့ ဦးဇင်းဆီကို လာပို့လှည့်ပါ..ဦးဇင်းလာခေါ်ရမယ်ဆိုလည်းလာခေါ်ပါမယ်…ဦးဇင်း ကျောင်းခွဲတည်လိုက်ခြင်းက အဲဒီလို အဖိုးအဖွားများကို စောင့်ရှောက်ချင်လို့ တည်လိုက်ခြင်းပါဘယ်မှာတွေ့တွေ့ မကျွေးချင်ရင်မပြုစုချင်ရင် လာရောက်ထားနိုင်ပါတယ်..ပေါက်မြို့နယ် ရှားပင်ရေရွာ တောင်ဘက်..သာယာအေးဓမ္မရိပ်သာကျောင်း..ဖုန်း=၀၉၂၅၆၁၄၇၅၈၃ဆိုပြီး လာရောက်ထားနိုင်တဲ့အကြောင်း ဖော်ပြထားတာပါ…ဒါကြောင့် အဘိုးအဘွားတွေကို လမ်းဘေးမှာ မစွန့်ပစ်ကြပါနဲ့ …ဦးဇင်းဆီ ဆက်သွယ်ပြီး ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်နော်… Read more
ငါးရက်လောက် ခေါင်းတွေယောင်ကိုင်းသွားခဲ့ပြီး မျက်စိပါကွယ်ခဲ့ရတဲ့ ဆံပင်အရောင်ဆိုးမှားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီSteph O’Dell ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ သူမ၏ ညီမလေးအသက် 18နှစ်ပြည့်တဲ့မွေးနေ့မှာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ ၊ Amsterdam မြို့သို့ အလည်အပတ်ခရီးသွားရန် စီစဉ်ခဲ့ပြီးနောက် အလှဆုံးဖြစ်ရန်အတွက် သူမ၏ ဆံပင်ကို အရောင်ဆိုးရန်ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ။ဒါပေမဲ့ ကံဆိုးစွာနဲ့ အဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ ဆံပင်အရောင်ဆိုးလိုက်လို့ 5ရက်လောက် ခေါင်းတွေယောင်ကိုင်းသွားခဲ့ပြီး မျက်စိပါကွယ်ခဲ့ရပါတယ်သူမဟာ အရောင်ဆိုးဆေးတွေမှာပါတဲ့ PPD ဆိုသောအရာနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်း ဖြစ်တတ်သည်ကိုအစကတည်းက သိရှိထားခဲ့ပါတယ် ။ ထို့ကြောင့် သူမဟာ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကို သူမဟာ Read more
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ.ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ သားဖြစ်သူကိုလေဆိပ်မှာသွားကြိုခဲ့တဲ့ ဖခင်ရဲ့လုပ်ရပ်
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ.ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ သားဖြစ်သူကိုလေဆိပ်မှာသွားကြိုခဲ့တဲ့ ဖခင်ရဲ့လုပ်ရပ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေမှုဟာ မြင့်မားလာသလို နိုင်ငံရပ်ခြားတွေကနေ ပြန်လာတဲ့ ခရီးသည်တွေကလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရနိုင်လို့ အတော်လေးကိုဂရုတစိုက်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ အချိန်ပါ ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံက ဖခင်တစ်ဦးဟာ အီတလီနိုင်ငံကနေပြန်ရောက်လာပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့သားဖြစ်သူကို သီးသန့်ခွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ လေဆိပ်မှာစနစ်တကျသွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ် ။ လေဆိပ်မှာ သွားရောက်မကြိုခင်ကတည်းက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အရင်ဆုံးဆက်သွယ်မေးမြန်ခဲ့ပြီး သားဖြစ်သူစီးနင်မည့်ကားကိုလည်း လုံခြုံစိတ်ချရအောင် ပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ပလပ်စတစ်အိတ်တွေနဲ့ ကာထားပြီး ၊ သားဖြစ်သူ ပူအိုက်မှုမဖြစ်အောင် ပိုက်နဲ့ လေအေးပေးစက်ကိုလည်း သွယ်ထားပေးခဲ့ပါတယ် ။ ထို့နောက် မည်သည့်နေရာမှ မဝင်ဘဲ လေဆိပ်ကနေ အိမ်သို့တန်းပြန်ခဲ့ပြီး Read more
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် အစိုးရကို “ပူ” မှာလား “ကူ” မှာလား? ( ပင်းတယမီးအိမ်ရှင် ဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ် )
အစိုးရကို “ပူ” မှာလား “ကူ” မှာလား? ပင်းတယမီးအိမ်ရှင် ဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ် ပြောကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားလို့ မေးရင် “အမေရိကန် ကိုးရီးယား အီတလီလို နိုင်ငံကြီးတွေတောင် Covid-19 အတွက် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးအော်နေချိန်ကျွန်တော်က အဆင်သင့်ပဲလို့ဖြေရဲစရာမရှိဘူး”။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအကြောင်းလည်း အားလုံးအသိပဲလေ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဆင့်က အောက်ဆုံးမှာရှိနေတယ်။ဒါကလဲ အခုအစိုးရကို အပြစ်ပုံစရာမဟုတ်။ သူလဲရှိတဲ့ အားနဲ့ချနေတာ အထိုက်အလျောက် တိုးတက်လာတာကြားနေရတာပဲ။တောက်လျှောက် အခြေခံမကောင်းခဲ့ဘဲ မကြိုးစားခဲ့ဘဲ ဆယ်တန်းရောက်မှ ဂုဏ်ထူးထွက်ချင်လို့ ဘယ်ရပါ့မလဲ။အခု ဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လဲ မကြုံစဖူးဆိုတော့ အားထုတ်မှုရှိတယ်‌လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အများကြီးတော့ မျှော်လင့်လို့မရဘူးပေါ့။ ကျနော်တို့က Read more
မိဘကျေးဇူးဆိုတာ အထူးကြီးမားလှပါတယ်…အမေ့နို့ဖိုးနဲ့ အဖေချွေးဖိုးက ဘယ်လိုမှ ကြေအောင်ဆပ်နိုင်တဲ့ အရာမဟုတ်ပါဘူး…ခုဘဝမှာတောင် အမေ့နို့တစ်လုံးဖိုးကို ဘယ်သူမှ ကြေအောင် မဆပ်နိုင်ကြဘူးမဟုတ်လား….. အမေတွေကတော့ သူမဘယ်လောက် ငတ်ပြတ်နေပါစေ သားသမီးစားဖို့အတွက် ဟင်းတစ်ခွက်တော့ မရရအောင် ရှာပေးတတ်ကြတာပါ….. မိဘတွေ အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်လာရင်လည်း သားသမီးတွေက တလှည့်ပြန် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရမှာ လူ့ကျင့်ဝတ်တစ်ခု သားသမီး ဝတ္ထရားတစ်ခုပဲ မဟုတ်လား… ခုပြောပြပေးမယ့် အဖြစ်အပျက်လေးကတော့ သမီးဖြစ်သူက အသက်ကြီးနေတဲ့ မိခင်ကို ရှာကျွေးပြုစုမှု မလုပ်တဲ့ အပြင် ရပ်တကာလှည့်တောင်းစားခိုင်းပြီး ရတဲ့ငွေတွေ ယူနေတဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ်အဖြစ်အပျက်ပါ…ဖြစ်စဉ်ကတော့ ဇင်းကျိုက်က ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲမှာ Read more